11/14/2013 09:45:00 AM celebrity-news
လာမယ့် စနေနေ့မှာ မင်္ဂလာဆောင်မယ် လို့ အွန်လိုင်းမှာလူသိများနေတဲ့
မေမြတ်မွန်က သူ့ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ ရေးထားပါတယ်။
သတို့သားလောင်းကတော့ သူ့ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ သူနဲ့ တရင်းတနှီးတွေ့ရသူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
သူ့ မင်္ဂလာသတင်းကို သိပ်မကြာသေးခင်ကပဲ အွန်လိုင်းမှာ အသိပေးထားတာပါ။
မေမြတ်မွန်ဟာ ကိုယ်တိုင်ရိုက်သီချင်းဆိုရုပ်သံတွေကြောင့် ဒီရက်ပိုင်း ထင်ရှားလာတာပါ။
သီချင်းရုပ်သံတွေ ရိုက်ထားတာ ကြာပြီလို့ ယူဆရပါတယ်။
သူ့မင်္ဂလာပွဲနီးမှ ဒီရုပ်သံတွေ အွန်လိုင်းမှာ ဆက်တိုက် ပေါ်ပေါက်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့မင်္ဂလာပွဲမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံတွေကို သူ့ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ တင်မယ်လို့လည်း ယူဆရပါတယ်။
11/14/2013 09:40:00 AM political-news
နိုဝင်္ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့က ရန်ကုန်တွင် ဆန္ဒပြကန့်ကွက်နေသူ အမျိုးသမီး (၂) ဦး။
နိုဝင်္ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့၌ စစ်တွေမြို့တွင် ပြုလုပ်မည့် အိုအိုင်စီ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ဆန္ဒပြခွင့်ကို သက်ဆိုင်ရာက ခွင့်ပြုပေးလိုက်ပြီဟု သတင်း ရရှိသည်။
“ စစ်တွေမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး (အမှတ်စဉ် ၅ / ၂၀၁၃)။ စာအမှတ် ၁၀၄၄ (၁) / ၁၁/ ၂၀၁၃ နဲ့ ဒီကနေ့ နေ့စွဲနဲ့ ခွင့်ပြု ပေးလိုက်ပါတယ်” ဟု ဦးဆောင်ရာတွင် ပါဝင်သူ တစ်ဦးက ပြောသည်။
ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံသူမှာ ဦးမောင်နုနု ဖြစ်ပြီး သူ့ အမည်ဖြင့် ခွင့်ပြုလိုက်သည်ဟု သူက ဆိုသည်။
“ ခွင့်ပြုတဲ့ စာထဲမှာ လူ ၅၀၀ ကို ခွင့်ပြုတယ်။ နံနက် ၉ နာရီက ၁၂ နာရီထိ စစ်တွေ လေဆိပ် အပြင်ဘက်မှာ ပြုလုပ်ခွင့်ပေးတယ်လို့ ပါဝင်ပါတယ်။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ စည်းကမ်းများ အတိုင်း ဆောင်ရွက်ကြရန် ဆိုပြီး စာထဲမှာ ညွှန်ကြားထားပါတယ်” ဟု သူက ဆိုသည်။
၎င်းပြင် ဦးဆောင် ဆန္ဒပြရန် ဦးအောင်နိုင်ချေ ( မိဇံရပ်ကွက်)နှင့် ပိုစတာများ၊ ဆိုင်းဘုတ်များကို လျှောက်ထားသူ ဦးမောင်နုနု လျှောက်ထားစာပါ အတိုင်း ခွင့်ပြုကြောင်း စာထဲတွင် ဖေါ်ပြထားသည်ဟု သိရသည်။
အိုအိုင်စီ ( အစ္စလာမ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အဖွဲ့)သည် ယနေ့ နံနက် ရန်ကုန်မြို့သို့ ရောက်ရှိလာပြီး နိုဝင်္ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် စစ်တွေသို့ ရောက်ရှိလာမည်ဟု သိရသည်။
11/14/2013 09:33:00 AM articles
လုပ်ငန်းခွင်။ စားဝတ်နေရေး အတွက်ဖြစ်ဖြစ် ဘဝအဓိပ္ပာယ် ပြည့်စုံမှုအတွက် ဖြစ်ဖြစ် အရွယ် ရောက်သူတိုင်း အလုပ်ကိုယ်စီ လုပ်ကိုင်ကြရသည်။ ထို့ကြောင့် လုပ်ငန်းခွင်သည် ကျွန်မတို့၏ ဒုတိယအိမ်သဖွယ်ဖြစ်လာတော့ သည်။ လုပ်ငန်းခွင်တွင် နေ့စဉ် ပြောဆိုဆက်ဆံနေရသည့် ပတ်ဝန်း ကျင်ရှိလူများ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် များကြောင့် အနည်းနှင့်အများဆို သလို စိတ်သဘောထား မတိုက်ဆိုင်သည့်အခါ စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်မိတတ်ကြသည်။
အလုပ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး မကောင်းမြင်တတ်သော အတွေးအမြင်များကို ရပ်တန့်ပြီး ယင်းအစား အကောင်းမြင်စိတ်ကို မွေးမြူပေးပါ။ စကားတစ်ခု ရှိပါ သည်။ 'သင်ကြုံတွေ့နေရသော အရာများသည် အဆိုးဆုံးမဟုတ်သေးပါ'။ မှန်သည်။ မုန်တိုင်းတွေထန်ပြီးလျှင် နေခြည်ဖြာမည့်အချိန် မကြာခင်ရောက်တော့မည်ဆိုသည် ကို သတိရပါ။
Ref: Indian Times
ကစားသမား ၆ ဦးသာ ကျန်တော့သဖြင့် ပွဲရပ်လိုက်ရသည့် ဘောလုံးပွဲ
11/14/2013 09:33:00 AM sport-news strange-news
ကစားသမား ၆ ဦးသာ ကျန်တော့သဖြင့် ပွဲရပ်လိုက်ရသည့် ဘောလုံးပွဲ အီတလီ မီဒီယာများက တနင်္ဂနွေနေ့က လီဂါပရို ပရိုင်မာတန်း (စီးရီးစီဝမ်း) ပွဲစဉ်အဖြစ် ဆလာနီတာနာနှင့် နိုစီရီနာတို့ ကစားသည့် ပွဲစဉ်ကို "အရှက်ရဖွယ် ဒါဘီပွဲ"ဟု ပြင်းထန်စွာ ရှုတ်ချ ရေးသားခဲ့ကြ
အီတလီနိုင်ငံမှ အဆင့်နိမ့် ဘောလုံးပွဲ တစ်ခုတွင် မြို့ခံပြိုင်ဘက် နှစ်သင်း၏ ပွဲစဉ်မှာ အရှက်ရဖွယ် အခြေအနေ တစ်ရပ်ဖြင့် ပွဲရပ်နားလိုက်ရကြောင်း သိရှိရသည်။ အီတလီ မီဒီယာများက တနင်္ဂနွေနေ့က လီဂါပရို ပရိုင်မာတန်း (စီးရီးစီဝမ်း) ပွဲစဉ်အဖြစ် ဆလာနီတာနာနှင့် နိုစီရီနာတို့ ကစားသည့် ပွဲစဉ်ကို "အရှက်ရဖွယ် ဒါဘီပွဲ"ဟု ပြင်းထန်စွာ ရှုတ်ချ ရေးသားခဲ့ကြသည်။ ယင်းပွဲစဉ်သည် ပွဲစပြီး (၂၁)မိနစ် အကြာတွင် ရပ်ဆိုင်းရန် အကြောင်းဖန်လာခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အသင်းတစ်သင်း၌ ကွင်းအတွင်း ကျန်ရှိသော ကစားသမား အရေအတွက် (၆)ဦးသာ ရှိတော့၍ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဒိုင်က ပွဲဆက်ကစားရန် လုံလောက်သည့် အခြေအနေ မရှိတော့ဟု ဆုံးဖြတ်ကာ ပွဲကို ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရသည်။
အဝေးကွင်းတွင် လာရောက်ကစားရသည့် နိုစီရီနာ အသင်းသားများသည် ပွဲမတိုင်မီ ၎င်းတို့အသင်း ပရိသတ်များထံမှ မကျေမနပ်ဖြင့် အသက်အန္တရာယ် ခြိမ်းခြောက်မှုများကို ရရှိထားသည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့သည် ပွဲမစမီ အသင်းဘတ်စ်ကားပေါ်မှ မဆင်းဘဲ ပေကပ်နေခဲ့ရာ မိနစ်(၄၀) နောက်ကျပြီးမှ ပွဲစဖြစ်ခဲ့သည်။ နိုစီရီနာ ပရိသတ်များကို ယင်းပွဲစဉ် ကြည့်ရှုခွင့် ပိတ်ပင်ထားသော်လည်း အတော်များများ ရောက်ရှိနေခဲ့ကြောင်းလည်း သိရသည်။ နိုစီရီနာ အသင်းသည် ပွဲစပြီး (၂)မိနစ်အတွင်း ၎င်းတို့၏ လူစားလဲခွင့် (၃)ကြိမ်လုံးကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ ထို့နောက် ကစားသမား (၅)ဦးက ဒဏ်ရာများ ရရှိကြောင်း အကြောင်းပြကာ ကွင်းအပြင် ထွက်နေခဲ့ကြသည်။
ထို့ကြောင့် ကွင်းထဲ၌ နိုစီရီနာ အသင်းသား (၆)ဦးသာ ကျန်တော့ပြီး ဒိုင်က ပွဲကို ဖျက်သိမ်းရွှေ့ဆိုင်းရန် မဖြစ်မနေ ရွေးချယ်ခဲ့ရသည်။ အီတလီ မီဒီယာများက နိုစီရီနာ အသင်းသားများသည် ပွဲမကစားလိုသဖြင့် ဟန်ဆောင် လုပ်ဆောင်မှု တစ်ခုဟု စွပ်စွဲရေးသားခဲ့ကြသည်။ နိုစီရီနာ အနေဖြင့် ရန်လိုနေသည့် ပတ်ဝန်းကျင်မှ မြန်နိုင်သမျှမြန်မြန် စွန့်ခွာရန် လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဟုလည်း ယူဆရသည်။ နိုစီရီနာ အသင်းကမူ မိမိတို့၏ ကစားသမားများ အနေဖြင့် သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်း မလုပ်ဘဲ ပွဲကစားခဲ့ရသဖြင့် ကြွက်သားများ တင်းမာကာ ဒဏ်ရာများ ရခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဖြေရှင်းထားသည်။
11/14/2013 09:31:00 AM articles
မနာလိုစိတ်ဟူသည် သူတစ်ပါးတို့၏ စည်းစိမ်ချမ်းသာများ၊ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုများ၊ ဂုဏ်သတင်းပျံ့ သင်းမွှေးကြိုင်မှုများနှင့် အောင်မြင်မှုများအပေါ် ငြူစူခြင်း၊ စောင်းမြောင်းခြင်း၊ မလိုလားခြင်း၊ မရှုဆိတ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အရကား ဣဿာစေတသိက်ရ၏။ ထိုဣဿာစေတသိက်သည် ဒေါသ မူစိတ်နှင့် ယှဉ်ရကား မနာလိုစိတ်သည် ဒေါသအခြေခံသော စိတ်ဓာတ်သာလျှင် ဖြစ်ပေတော့သည်။ မနာလိုခြင်းသည် မိမိကိုယ်ကိုယ် သူတစ်ပါးအောက် ညံ့သည်ဟု ဝန်ခံခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ မနာလိုစိတ် နည်းပါးခြင်း ဟူသည်ကား သဘောထားကြီးခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ သဘောထား ကြီးကြမှသာ မနာလိုစိတ် နည်းပါးကြပေလိမ့်မည်။
၁။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ပုံနှင့် ငွေစက္ကူ
၁၂-၉-၂၀၁၃ ရက်နေ့က ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး လွှတ်တော် အစည်းအဝေး၌ သင်္ဃန်းကျွန်း မဲဆန္ဒနယ်မှ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်က ငွေစက္ကူများတွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ရုပ်ပုံများ ပြန်လည် ထည့်သွင်းပေးရန် အဆိုတင်သွင်းခဲ့၏။ ထောက်ခံသူ ကန့်ကွက်သူများ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး မဲခွဲ ဆုံးဖြတ်သောအခါ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၁၂၃ ဦး ရှိသည့်အနက် ၁၂၁ ဦးက ကန့်ကွက်ခဲ့သောကြောင့် အဆို ရှုံးနိမ့်သွားကြောင်း သိရပါသည်။ ထောက်ခံသူ နှစ်ဦးမှာ အဆိုတင်သွင်းသူနှင့် အဆိုထောက်ခံသူ နှစ်ဦးတို့သာ ဖြစ်ကြောင်း သိနိုင်ပါသည်။
အမှန်အားဖြင့် ဤကိစ္စသည် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်တစ်ခုက ဆုံးဖြတ် ဆောင်ရွက်နိုင်သော ကိစ္စ မဟုတ်သောကြောင့် မဲခွဲ ဆုံးဖြတ်ရမည့် ကိစ္စ မဟုတ်ပါ။ အဆိုတင်သွင်းသူ ရှိလာလျှင်ပင် သဘာပတိ လုပ်သူက မဲခွဲ ဆုံးဖြတ်ရန် လက်မခံသင့်ပါ။ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းပေးမည်ဟု အကြောင်းပြကာ မှတ်တမ်းတင်ရုံသာ ဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စဖြစ်သည်။ ယခုမူကား မဲခွဲ ဆုံးဖြတ်လိုက်သောကြောင့် ‘အူ-လူမြင်တယ်’ဟူသော စကားကဲ့သို့ ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။
အဆိုတင်သွင်းသူက လက်ရှိ အသုံးပြုနေသည့် ငွေစက္ကူများတွင် ခြင်္သေ့ရုပ်ပုံ ဖော်ပြထားခြင်းသည် ပါတီကြီးတစ်ခု၏ သင်္ကေတရုပ်ပုံနှင့် တူညီနေ၍ နိုင်ငံတော်အဆင့် သင်္ကေတနှင့် တူညီနေခြင်းမှာ မဖြစ်သင့်ဟု အကြောင်းပြခဲ့သည်။ မှားယွင်းသော အကြောင်းပြချက် ဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံတိုင်း၌ ပြည်သူလူထု လေးစားကြည်ညိုသော ခေါင်းဆောင်များ၏ ရုပ်ပုံကိုသာ ငွေစက္ကူများ၌ ထည့်သွင်း သုံးစွဲကြကြောင်း၊ ယခု မြန်မာ ငွေစက္ကူများ၌ တိရစ္ဆာန်ရုပ် ထည့်သွင်းခြင်းမှာ မသင့်လျော်ကြောင်း အကြောင်းပြလိုက်လျှင် ပြည့်စုံပါသည်။ ယခုမူကား အကြောင်းပြချက် မသင့်လျော်သောကြောင့် ခြင်္သေ့ကို အထိမခံနိုင်၍ ကန့်ကွက်သူတွေ များသွားသလားဟု တွေးဆ ရပါတော့သည်။
ကန့်ကွက်သူ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်မှ ကိုယ်စားလှယ် ဦးစောလှထွန်း (တစ်နေရာ၌ ဦးစိုးလှထွန်းဟု တွေ့ရ၏) က “ငွေစက္ကူဒင်္ဂါး ထုတ်လုပ်ခြင်းသည် ပြည်ထောင်စု အဆင့်ကသာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိ၍ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် အနေနှင့် ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ရန် မသင့်ကြောင်း၊ ခြင်္သေ့ရုပ်ပုံသည် ပါတီတစ်ခု၏ သင်္ကေတနှင့် တူညီနေသည်ဆိုသော စွပ်စွဲချက်သည် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများနှင့် ကိုက်ညီမှု မရှိ၍ မဆွေးနွေး သင့်ကြောင်း” ပြောဆို ကန့်ကွက်ခဲ့ပါလျက် မဲခွဲ ဆုံးဖြတ်သည်အထိ ဖြစ်သွားခြင်းမှာ သဘာပတိ၏ ညံ့ဖျင်းမှုသာ ဖြစ်ပါသည်။ ကန့်ကွက်ကြခြင်းမှာ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်သို့ မတင်သွင်းသင့်သော အဆိုကို တင်သွင်းခြင်းကြောင့် လော။ (သို့မဟုတ်) ခြင်္သေ့ပါတီကို ထိပါးခြင်း ကြောင့်လော (သို့မဟုတ်) ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအပေါ် မနာလိုစိတ် ကြောင့်လော ကန့်ကွက်သူများသာ သိကြပါလိမ့်မည်။
၂။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအပေါ် မနာလိုစိတ်ဖြစ်ဖွယ် အကြောင်းနှစ်မျိုး
ဗိုလ်ချုပ်အပေါ် မြန်မာနိုင်ငံသည် ပြည်သူလူထု အများကြီးက လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ လေးစားကြည်ညို ချစ်ခင်ကြသော်လည်း မနာလိုသော အစိတ်အပိုင်းများ ရှိနေကြသည်ကား အမှန်ပင်ဖြစ်၏။ အဆက်ဆက်သော အာဏာပိုင်များက ဗိုလ်ချုပ်နှင့် ပတ်သက်သော နေ့ထူးရက်ထူးကြီးများကို သိမ်ငယ်အောင် ပြုလုပ်လာခြင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်၏ ရုပ်ပုံများကို ပြည်သူများ တန်ဖိုးထား သုံးစွဲသော ငွေစက္ကူများပေါ်မှ ဖယ်ရှားလာခြင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်၏ သမိုင်းကို မှေးမှိန်အောင် ပြုလုပ်လာခြင်း စသည်တို့မှာ ဗိုလ်ချုပ်အပေါ် မနာလိုစိတ် ရှိကြောင်း ပြသရာ၌ ထင်ရှားသော သက်သေ သာဓကများ ဖြစ်ပါသည်။
ဗိုလ်ချုပ်သည် တိုင်းပြည်အတွက် အမှန်တကယ်ပင် စွန့်လွှတ်အနစ် နာခံခဲ့သော ခေါင်းဆောင်ကောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်၏။ သို့သော် ဗိုလ်ချုပ်သည် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာ၌ စိတ်အလိုမကျလျှင် မကျသလို ခပ်ကြမ်းကြမ်း ခပ်ရိုင်းရိုင်း ပြောဆိုတတ်၏။ ထို့ကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်နှင့် သက်တူရွယ်တူများ (သို့မဟုတ်) ဗိုလ်ချုပ်ထက် အသက်ကြီးသော လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ အနေနှင့် ဗိုလ်ချုပ်၏ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ခပ်ရိုင်းရိုင်း ပြောဆိုခံရခြင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်အား ပြည်သူလူထု၏ တစ်ခဲနက် လေးစားကြည်ညို ခံရခြင်းအပေါ် ပုထုဇဉ် သဘောအရ မနာလိုမရှုဆိတ်မှုများ ဖြစ်နိုင်သည်သာ ဖြစ်ပါသည်။
သို့သော် ယခုခေတ် နိုင်ငံရေးသမားများ အထူးသဖြင့် ၈၈ အရေးအခင်းပြီး နောက်ပိုင်း နိုင်ငံရေးသမားများမှ စ၍ ဗိုလ်ချုပ်နှင့် တွဲလုပ်ဖူးသူ တစ်ယောက်မျှ မရှိချေ။ ၈၈ ခုနောက်ပိုင်းမှ စ၍ ဗိုလ်ချုပ် ရုပ်ပုံများကို ငွေ စက္ကူများပေါ်မှ ဖယ်ရှားလာခြင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်နှင့် ပတ်သက်သော နေ့ထူး ရက်ထူးကြီးများကို ပိုမိုသိမ်ငယ်အောင် ပြုလုပ်လာခြင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်၏ သမိုင်းကြောင်းကို ခေတ်လူငယ်များ သိရှိမှု နည်းပါးစေရန် ဆောင်ရွက်လာခြင်းတို့ကို ထောက်ဆလျှင် ၈၈ ခု နောက်ပိုင်း နိုင်ငံရေးသမားများကပင် ဆရာကြီးများထက် ပို၍ လက်စောင်းထက် လာသလောဟု တွေးတောစရာ ဖြစ်လာရပါသည်။
ယခုခေတ် နိုင်ငံရေးသမားများ ဗိုလ်ချုပ်အပေါ် မနာလိုစိတ် ဖြစ်ကြရာ၌ အာစရိယ ပါစရိယ (ခေါ်) ဆရာအဆက်ဆက်ပေါ် သစ္စာ စောင့်သိခြင်းကြောင့်လော (သို့မဟုတ်) ဒေါ်စုကြည် နိုင်ငံရေး ဇာတ်ခုံပေါ် ရောက်လာခြင်းကြောင့် လောဟု တွေးတောရပါသည်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် ဒေါ်စုကြည် နိုင်ငံရေးလောက ဝင်ရောက်လာခြင်းနှင့် ၈၈ ခုနောက်ပိုင်း ဗိုလ်ချုပ်အပေါ် မလိုလားသော လုပ်ရပ်များ တိုးပွားလာခြင်းတို့မှာ တိုက်ဆိုင်နေခဲ့၏။ ဒေါ်စုကြည်သည်လည်း ဖခင်နည်းတူ ပြည်သူလူထု၏ ထောက်ခံမှုကို တစ်ခဲနက် ရရှိခဲ့၏။ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲတို့သည် ဒေါ်စုကြည်အတွက် လူထုထောက်ခံမှု သက်သေပင် ဖြစ်သည်။ ဒေါ်စုကြည် ထိုသို့ အောင်မြင်လာသောကြောင့် ပြိုင်ဘက်၏ ဒေါ်စုကြည်အပေါ် မနာလိုစိတ်သည် ဗိုလ်ချုပ်အပေါ်ပါ ကူးစက်လာခြင်းလော (သို့မဟုတ်) ဗိုလ်ချုပ်ကို ဂုဏ်တင်လျှင် ဒေါ်စုကြည်၏ ဂုဏ်ပါ ပို၍တက်လာမည် စိုးသောကြောင့် လောဟု တွေးဆရပါသည်။
ဒေါ်စုကြည် နိုင်ငံရေးလောကထဲ ဝင်လာစ အချိန်တွင် ပြည်သူလူထုက ဗိုလ်ချုပ်သမီးဟူသော စိတ်ဖြင့် မော့ကြည့်ခဲ့ကြသည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်၏။ သို့သော် နောက်ပိုင်း ယနေ့ကာလအထိ ဒေါ်စုကြည်ကို ထောက်ခံကြခြင်းမှာ ဗိုလ်ချုပ်သမီးဟူသော စိတ်ဖြင့် မဟုတ်တော့ပါ။ ဒေါ်စုကြည်၏ ပင်ကို အရည်အချင်းများအပေါ် ယုံကြည် လက်ခံလာသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ဒေါ်စုကြည် ယနေ့ အမှားအယွင်း များစွာ ပြုလုပ်ပြောဆိုလာလျှင် ယနေ့ပင် ပြည်သူလူထုက ဒေါ်စုကြည်ကို ပစ်ပယ်ဖို့ ဝန်လေးမည် မဟုတ်ပါ။ မဆလ အစိုးရ၏ ကုလားထိုင်ကို စတင် လှုပ်ရမ်းခဲ့သော ဦးအောင်ကြီးကို လူထုက ရှေးဦးစွာ အထင်ကြီး အားကိုးခဲ့၏။ သို့သော် ဦးအောင်ကြီး မိန့်ခွန်းကို ရေဒီယိုမှ နားထောင်လိုက်ရ ကတည်းက ဦးအောင်ကြီးအပေါ် အထင်ကြီး လေးစားစိတ်များ လျော့ပါး သွားပါတော့သည်။ ပြည်သူလူထု အများစုကို နလပိန်းတုံးများဟု မှတ်ထင်လျှင် မှားလိမ့်မည်။ ပြည်သူလူထု လေးစား ကြည်ညိုသော ဗိုလ်ချုပ်အပေါ် အကောင်းမထင်လျှင် ပြည်သူလူထု ကလည်း ထိုပုဂ္ဂိုလ်များအပေါ် မည်သည့်အခါမျှ အကောင်း ထင်ကြလိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။
၃။ ဘုရားရှင်နှင့် ခြင်္သေ့မင်း
ခြင်္သေ့မင်းကား သားကောင်အပေါင်းတို့တွင် ရှင်ဘုရင်ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် ကေသရာဇ ခြင်္သေ့မင်းဟု ခေါ်တွင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘုရားရှင်သည် ဟီနူပမာ (ယုတ်ညံ့သောဥပမာ) အနေအားဖြင့် ကိုယ်တော်မြတ်ကို တစ်ခါ တစ်ရံ ခြင်္သေ့မင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်တော်မူခဲ့သည်။ လုံ့လဝီရိယ စိုက်ထုတ်သည့် နေရာ၌ ခြင်္သေ့မင်းသည် သားကောင်များကို လိုက်ရာတွင် သားကောင် မည်မျှ ငယ်သည်ဖြစ်စေ (ယုန်ကလေးပင် ဖြစ်စေ) သားကောင်ကြီးများကို လိုက်သော လုံ့လဝီရိယအတိုင်း လိုက်သကဲ့သို့ ထို့အတူ ကိုယ်တော်မြတ် သည်လည်း တရားဟောရာ၌ တရားနာ ပရိသတ် မည်မျှပင် နည်းပါးသည် ဖြစ်စေ (တစ်ဦးတည်းပင် ဖြစ်စေ) ပရိသတ် များစွာကို ဟောသော လုံ့လဝီရိယ အတိုင်း ဟောတော်မူကြောင်း နှိုင်းယှဉ်တော် မူခဲ့ပါသည်။
ဒါက နှိုင်းယှဉ်သင့်သော နေရာ၌ နှိုင်းယှဉ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် ငွေစက္ကူတွင် ရုပ်ပုံထည့်သွင်းသော ကိစ္စမျိုး၌ ပြည်သူလေးစား ကြည်ညိုသော ခေါင်းဆောင်နှင့် အဟိတ်တိရစ္ဆာန်တို့ကို ထပ်တူ မပြုအပ်ချေ။ ယခုကား ထပ်တူ မပြုရုံမက ပြည်သူ လေးစားကြည်ညိုသော ခေါင်းဆောင်ကို ခြင်္သေ့အောက်ပင် ချထားကြောင်း ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာ တွေ့မြင် နေရပါသည်။ ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံများ သည်လည်း ပြည်သူ လေးစားကြည်ညိုသော ခေါင်းဆောင်ပုံများကိုသာ ငွေစက္ကူ၌ ထည့်သွင်း သုံးစွဲကြောင်း အစိုးရမင်းတို့ သတိပြုသင့်ကြ ပါသည်။
၄။ သူ့ဂုဏ်ကိုမြှောက် ကိုယ့်ဂုဏ်မြောက်၏
ဘုရားရှင်က သူတော်ကောင်း လက္ခဏာများ အဖြစ် (က) မိမိအပြစ်ကို ပြောစရာ ကြုံလာလျှင် လျှော့မပြောရ၊ (ခ) မိမိဂုဏ်ကို ပြောစရာ ကြုံလာလျှင် လျှော့ပြောရမည်၊ (ဂ) သူတစ်ပါး အပြစ်ကို ပြောစရာ ကြုံလာလျှင် လျှော့ပြောရမည်၊ (ဃ) သူတစ်ပါးဂုဏ်ကို ပြောစရာ ကြုံလာလျှင် သာသာ ထိုးထိုး ပြောရမည်ဟု မိန့်တော်မူခဲ့၏။ သို့သော် လောကကြီးကား ပြောင်းပြန် ဖြစ်နေတတ်ပါသည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကား အသက် ၃၂ နှစ်သာသာ အရွယ်မျှဖြင့် တိုင်းပြည်အတွက် အရွယ်နှင့် မလိုက်အောင် အံ့မခန်း ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့၏။ မည်မည်ရရ စည်းစိမ် မခံစားရဘဲ တိုင်းပြည်အတွက် အသက်ပေးဆပ်ခဲ့၏။ သူ၏ စိတ်ဓာတ် အခြေခံကြောင့်ပင် သူ၏ ရုပ်ပုံလွှာတို့သည် အမြဲတမ်း ကြည်လင် သန့်ရှင်းနေပါသည်။ သူနှင့် ခေတ်ပြိုင်သူနှင့် အဆင်မပြေသော ပုဂ္ဂိုလ်အချို့မှ လွဲ၍ ကျန်ရှိသူများ အနေနှင့် ဗိုလ်ချုပ်အပေါ် မနာလိုစိတ်များ၊ မလိုလားစိတ်များ မည်သို့မျှ မထားသင့်ပါ။
ဒီမိုကရေစီ အစိုးရ လက်ထက်၌ တစ်သောင်းကျပ်တန် ငွေစက္ကူ ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး ဖြစ်၏။ ထိုစဉ်ကတည်းက ငွေစက္ကူ၌ ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ပုံကိုသာ ထည့်သွင်းခဲ့လျှင် သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်နှင့် အစိုးရအဖွဲ့၏ ဂုဏ်သတင်းသည် လည်းကောင်း၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ၏ ဂုဏ်သတင်းသည် လည်းကောင်း လက်ရှိ အခြေအနေထက် များစွာ တိုးတက်လာမည်မှာ သေချာလှပါသည်။ ဒီမိုကရေစီ ခေတ်ကြီးတွင် ပြည်သူလူထု ကိုယ့်ဘက်ပါလာအောင် ပါးနပ်ဖို့ အထူး လိုအပ်လှပါသည်။ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိစ္စ၌ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော အနေအထားကြောင့် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်နေသော တပ်မတော် အပါအဝင် အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီတို့၏ အမှတ်များ အကြီးအကျယ် လျော့ကျသွားနိုင် ပေသည်။ သဘောထားကြီးစွာဖြင့် သူတစ်ပါးဂုဏ်ကို မြှောက်လျှင် ကိုယ့်ဂုဏ်ပါ မြောက်နိုင်ပါသည်။
အကယ်၍သာ နောက်ထပ် ငွေစက္ကူကိစ္စ ပေါ်လာလျှင် ဗိုလ်ချုပ်ပုံ ထည့်သွင်းမှုကို ထောက်ခံခြင်း၊ အာဏာရပါတီ၏ အစိုးရအဖွဲ့က ခန့်ထားသော ဌာနဆိုင်ရာ အဓိက ဝန်ထမ်းများအပေါ် ပြည်သူလူထု၏ မကျေနပ်မှုများကို လျှော့ချခြင်းတို့ကို မပြုလုပ်နိုင်ပါက ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ အနေနှင့် ကြီးမားသော အကျပ်အတည်းနှင့် ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မည် ဖြစ်ကြောင်း သဘောရိုးဖြင့် အကြံပြုရေးသားလိုက် ရပေသည်။
ဘဒ္ဒန္တ နန္ဒဝံသ (ပထမကျော်၊ မဟာဓမ္မာစရိယ M.A) ၊ တောင်ငူ
မိုင်းဖုန်းဆရာတော် ပြည်တော်ပြန်ခရီး ကြိုဆိုရန် တာချီလိတ်ဒေသခံများပြင်ဆင်
11/14/2013 09:04:00 AM Myanmar-news
Wednesday, 13 November 2013 20:24
ထိုင်းနိုင်ငံ လမ်းပန်းမြို့တွင် သုံးနှစ်ကျော် ဂူအောင်းတရားကျင့်သော မိုင်းဖုန်းဆရာတော် ခူးဝါးဝန်းစုမ့် သည် ယခုလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် တာချီလိတ်မြို့ရှိ ဆရာတော်၏ စံမြန်းရာကျောင်းတော်သို့ပြန်လည်ကြွချီမည်ဖြစ်သဖြင့် ဒေသခံလူထုတို့မှ စောင့်ကြိုကြ ရန်ပြင်ဆင်နေကြ ကြောင်း ကြားသိရပါသည်။
ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဉာဏသံဝရ (ခူးဝါးဝုန်းစုမ့်) သည် ၁၅ ရက်နေ့မနက် ၈ နာရီ ထိုင်းနိုင်ငံမှ တာချီလိတ်မြို့သို့ ကြွချီမည်ဖြစ်ပြီး နဂါးနှစ်ကောင် ကျောင်းတိုက်တွင် ကထိန်သင်္ကန်းကပ်လှူပွဲသို့ ကြွရောက်တရားဟောကြားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၊ ကြိုဆိုရန် အတွက် သျှမ်းပြည် အရှေ့ပိုင်း ကျားဖြူပါတီအကြီးအကဲ ဆရာမနန်းငွေမြက ဒေသခံလူထုအား ဦးဆောင်၍ ပြင်ဆင်မှုပြု လုပ်နေကြောင်း ဆိုပါ သည်။
“ ဆရာတော်က ၁၅ ရက်နေ့ နဂါး ၂ ကောင်ကျောင်းတိုက်မှာ ကထိန်သင်္ကန်းအလှူ တရားဟောပြီးရင် တည ကျိန်းမယ်။ ၁၆ နဲ့ ၁၇ ရက်နေ့ကျတော့ မိုင်းဖုန်းမှာရှိတဲ့ ဖရထတ် စောမ်ဟုန်ကျောင်းမှာ ကျိန်းမယ်။ ၁၈ ရက်နေ့မှ ဆရာတော်ရဲ့ကျောင်း တော်ဖြစ်တဲ့ ဖရထတ်ဆီလောန်းဟိန်း ကိုကြွချီမယ်” ဟု ဆရာတော်၏ ခရီးစဉ်အား ဆရာမနန်းငွေမြက ပြောပြသည်။
အောက်တိုဘာလနှောင်းပိုင်းက ကျားဖြူပါတီ လွှတ်တော်အမတ်များ ဆရာတော်၏ဂူသို့သွားကာ မိုင်းဖုန်းရှိကျောင်းတော် သို့ပြန်လည်ကြွချီနေထိုင်တော်မူရန် ပင့်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။
“ ဆရာတော်က မိုင်းဖုန်းကျောင်းမှာဘဲဆက်လက်နေထိုင်သွားမှာလား။ ဘယ်လောက် အထိနေသွားမလဲဆိုတာကျမတို့လဲ မသိရသေးဘူး။ ကျမတို့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော့ ဆရာတော်ဘုရားကိုဘယ်မှမကြွချီစေချင်တော့ဘူး။ စံကျောင်းမှာဘဲပြန် လာနေစေချင်ပါတယ်” ဟုဆရာမနန်းငွေမြကပြောပါသည်။
စစ်အစိုးရခေတ် ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် ဦးဆောင်သည် စစ်ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့က ဆရာတော်အား မတရားအသင်း ဆက် သွယ်မှု၊ ပြည်ထောင်စုပြိုကွဲစေသည့် တရားတော်များ ဟောကြားမှုအစရှိအမှုများဖြင့်စွပ်စွဲကာ ၂၀၀၄ ခုနှစ်က ဖမ်းဆီးရန် ကြိုးစားစဉ် ဆရာတော်မှာ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ တိမ်းရှောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို အချိန်မှစ၍ တခြားအရပ်သို့ကြွချီ တရားဟောခြင်း မပြုတော့ ဘဲ မိမိကျောင်းတော်တွင်သာ တနှစ်တကြိမ် မွေးနေ့အလှူကျင်းပခဲ့၏။ သို့သော်လည်း ၂၀၁၀ မှစ၍ လမ်းပန်း မြို့ရှိ မဟာဗောဓိဂူတွင် ဂူအောင်း တရားကျင့်ခဲ့ရာ ယနေ့တိုင် ၄ နှစ်နီးပါးရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
11/14/2013 08:56:00 AM learn-english
break into =ဖောက်ဝင်သည်
Thieves broke into the rich man's house.
သူခိုးတွေက သူဌေးအိမ်ထဲကို ဖောက်ဝင်တယ်။
break into =အသံထွက်ရယ်သည်
When he told them about the eccentric rich man, they broke into laughter.
သူက အူကြောင်ကြောင် သူဌေးအကြောင်းကို ပြောပြသောအခါ သူတို့ရယ်ကြတယ်။ (အသံထွက်ရယ်တာကို ဆိုလိုပါတယ်)
break out =ဖြစ်ပွားသည်
Fire broke out in the northern part of the village.
ရွာမြောက်ပိုင်းမှာ ရုတ်တရက် မီးလောင်တယ်။
In disaster areas epidemics broke out.
ဒုက္ခရောက်တဲ့ ဒေသတွေမှာ ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားတယ်။
busy with =နှင့် အလုပ်များသည်
The officer was busy with office work.
အရာရှိက ရုံးကိစ္စနဲ့ အလုပ်များနေတယ်။
I am busy with the writing ofabook.
ငါ စာအုပ်တစ်အုပ်ရေးတဲ့ကိစ္စနဲ့ အလုပ်များနေပါတယ်။
call at =မှာတွေ့ဖို့ ခေါ်သည်
He was asked to call at the office.
သူ့ကို ရုံးခန်းမှာတွေ့ဖို့ ခေါ်ထားတယ်။
(နေရာ နှင့်ပတ်သက်၍ call at)
call on =နှင့်တွေ့ဖို့ ခေါ်သည်
He was asked to call on the manager.
သူ့ကို မန်နေဂျာနဲ့ တွေ့ဖို့ခေါ်ထားတယ်။
(လူနှင့် ပတ်သက်၍ call on)
He was asked to call on the manager at the office.
သူ့ကို ရုံးခန်းမှာ မန်နေဂျာနဲ့ တွေ့ဖို့ခေါ်ထားတယ်။